Cagaar dhaqid, dhaqan suuqgeyneed "cagaaran" | Bezzia
Cagaar dhaqid, dhaqan suuqgeyneed “cagaaran”.
Maria vazquez | 14/05/2022 10:00 | Wararka
Ma waxaad u beddeleysaa caadooyinkaaga isticmaalka kuwa sii waaraya? Malaha inta aad jidka ku jirtid waxaad yeelan doontaa shakiyo badan oo la xidhiidha xaqiiqada waxa calaamadahan ama badeecadaas ay isku dayaan inay ku iibiyaan. Iyo in ay fududahay in la ahaado dhibanaha dhaqashada cagaaran.
Shirkaduhu had iyo jeer si cadaalad ah uma ciyaaraan shaqadooda xeeladaha suuq-geynta. Daraasadaha qaarkood waxay sheeganayaan in 4,8 oo kaliya ee badeecadaha lagu qeexay "cagaaran" ay dhab ahaantii ka jawaabaan sifooyinka. Sidee lagu gartaa oo looga hortagaa dhaqidda cagaaran?
1 Waa maxay Green-washing?
2 Sidee loo ogaadaa?
2.1 Soo sheeg khayaanada
Waa maxay Green-washing?
Aan ka bilowno bilowga. Waa maxay cagaar-dhaqashada? Marka la soo koobo, waxaynu odhan karnaa waa a dhaqanka suuq-geynta cagaaran loogu talagalay in uu abuuro sawir dhalanteed ah oo mas'uuliyadda deegaanka ah, iyada oo ka faa'iidaysanaysa u nuglaanshaha iyo akhlaaqda dadka doorbidaya isticmaalka adeegyadan ama alaabtan.
Erayga ka yimid cagaarka Ingiriisiga (cagaaran) iyo dhaqidda (dhaqashada), maaha mid cusub. Marka loo eego Encyclopedia ee Mas'uuliyadda Bulsho ee Shirkadaha, waxay ahayd deegaanka Jay Westerveld oo kelmaddan curiyay qoraal 1986-kii, ka dibna u tixraacay warshadaha hoteellada.
Waxa kale oo loo yaqaannaa caddaymo eco, dhaqid deegaan ama ilbaxnimo, cagaar dhaqid shacabka la marin habaabiyo, xoogga saaraya aqoonsiga deegaanka ee shirkad, qof ama badeecada marka ay kuwanu khusayn ama aan sal lahayn.
Dhaqankan xun ee ay maanta shirkado badani ku dhaqmaan si ay sumcaddooda u nadiifiyaan oo ay macaamiishooda u kasbadaan waxa uu leeyahay cawaaqib xumo saamayn taban ku leh macaamiisha, suuqa iyo dabcan deegaanka.
waxay horseedaan khaladaad xagga aragtida ah ee macaamilka oo ka faa'iidayso rabitaanka macaamilka ee ah in la dhiso dhaqan deegaan oo togan.
Kaliya ma dhacayso faa'iidada la xayeysiiyay, laakiin waxay dhalinaysaa saamayn waynama iyadoo la kordhinayo isticmaalka.
Waxay waxyeelo u tahay shirkadaha kale, sababtoo ah waxay keentaa tartan cadaalad daro ah, oo aan waafaqsanayn mas'uuliyadda bulsho ee shirkadda.
Sidee loo ogaadaa?
Si aad uga fogaato dhaqidda cagaarka, waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida loo garto. Waa maxay xeeladaha ay isticmaalaan shirkaduhu si ay u dhaliyaan aragtidan mas'uuliyadda deegaanka ama waaritaanka? Ogaanshaha iyaga waxay naga caawin doontaa inaan aad u feejignaano oo u feejignaano fariimaha qaarkood.
Ka digtoonow "dabiiciga ah", "100% eco" iyo "bi(o)". Haddii alaabtu muujiso noocyadan sheegashada oo aysan la socon iyaga sharaxaad faahfaahsan, ka shaki. Marka alaabtu tahay mid dabiici ah oo dhab ah, kama labalabayso inay bixiso macluumaad faahfaahsan oo cad oo ku saabsan maaddooyinkeeda iyo hababka wax-soo-saarka.
Ka fogow luqadda madmadow. Istaraatiijiyad kale oo caadi ah waa in la soo bandhigo ereyo ama kelmado tilmaamaya faa'iidooyinka waara ama deegaanka laakiin aan lahayn fikrad cad ama aasaas.
Midabku yuusan ku khiyaanayn: Codsiga cagaarka calaamadahooda waxay ku badan tahay shirkadaha raba inay kaa dhaadhiciyaan xiriirka ay la leeyihiin waaritaanka iyo daryeelka deegaanka. Dabcan, sababtoo ah alaabtu waxay isticmaashaa midabka cagaarka ah waa inaadan hadda u malayn in ay jirto khiyaano, laakiin kuma filna in la doorto.
Ma aha taageeridda sabab cagaaran Waa cagaar. Sidoo kale kuma filna in shirkadu ay taageerto urur u dagaalama deegaanka si loo dammaanad qaado in wax soo saarka ama nidaamka wax soo saar ee shirkadu yahay.
Marka xeeladaha ugu muhiimsan la ogaado, habka ugu wanaagsan ee looga fogaado ku dhaca khiyaano waa si taxadar leh u akhri calaamadaha oo kala saar ka kooban yahay alaabta. Maxaa dhacaya haddii macluumaadka aan raadineyno uusan ku qorneyn calaamadda? Markaa waxaad ka raadin kartaa shabakadooda. Ka shakiyo haddii aysan halkaas midkoodna; La'aanta xog sugan oo sax ah ayaa inta badan sabab u ah feejignaanta.
Markaad akhrinayso calaamadaha waxay noqon doontaa caawinaad weyn in la ogaado shahaado saddexaad aan lug ku lahayn. Dhammaan stamp-yadu isku qiimo maaha; raadi kuwa bixiya dammaanad qaadka heerka Isbaanishka iyo Yurub. Waxaan hore uga hadalnay Bezzia oo ku saabsan shahaadooyinka dharka waxaanan ballan qaadaynaa inaan sidaas samayno ka hor Ecolabels kale ee Yurub kuwaas oo dammaanad qaadaya saamaynta xaddidan ee deegaanka.
Markaad ogaato been abuur, ha ka saarin, soo sheeg! Waxaad ku samayn kartaa shabakadaha bulshada, isla shirkad isku mid ah iyo dabcan sida macaamiisha mid ka mid ah ururada ilaalinta macaamiisha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Wararka » Cagaar dhaqid, dhaqan suuqgeyneed “cagaaran”.
Sida loo baro dhallaankaaga inuu ka cabbo koob